हामीले सहि कुरालाई सहि र गलत कुरालाई गलत भन्न सक्नु पर्छ :जनार्दन शर्मा(क.प्रभाकर) - Rajmarga
हामीले सहि कुरालाई सहि र गलत कुरालाई गलत भन्न सक्नु पर्छ :जनार्दन शर्मा(क.प्रभाकर)
हिजो बसेको नेकपा स्थायी कमीटी बैठकमा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य, संगठन विभाग उपप्रमुख, सफल उर्जामन्त्री तथा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा सिमा समस्या र समाधान एजेन्डामा आफूले गलत र सही दुवै कुरा भन्नु पर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले आफू गलत लाई गलत र सहीलाई सही भन्ने भन्दै यस्तो धारणा राख्नु भएको हो ।
हाम्रो बैठक संवेदनशील समयमा भएको छ भन्ने तर्क राख्दै उहाँले स्थायी समिति बैठकमा ब्यक्त गर्नु भएको धारणा यस्तो रहेको छ ।
राजनीतिको प्रारम्भिक चरणमा मैले सबैभन्दा पहिला लगाएको नारा थियो ‘जनतन्त्र र जनजीविकाको ग्यारेन्टी गर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर’ ।
आज म उक्त नारा लगाउने ठाउँमा होइन त्यो पूरा गर्ने पार्टीको सदस्य छु । मैले पढेका हरेक राजनैतिक प्रतिबेदनहरु राष्ट्रलाई अर्ध सामान्ती र अर्ध औपनिवेशिक अबस्थाबाट मुक्त गर्ने भन्ने थिए । ७० वर्षको राजनीतिक संघर्ष जनयुद्ध, जनआन्दोलन हुँदै संबिधान सभाबाट नयाँ संबिधानको घोषणा पश्चात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भएसँगै अर्ध सामान्ती अवस्थाको अन्त र जनतन्त्रको स्थापना भएको छ । यद्यपि यसलाई सुदृढीकरण गर्न र सामान्ती अवशेष विरुद्ध निरन्तर संघर्ष आवश्यक छ । तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ अझै पूरा भएको छैन । यति बेला हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताको संघर्षमा छौ । यो लडाइ जनतन्त्र स्थापना गर्नु भन्दा जटिल छ ।
दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइमा हामी छौं । यसका दुइटा पक्ष छन्।
१. बिदेशी हस्तक्षेप,सिमा अतिक्रमण लगायतका कुराहरु जो अहिले कालापानी र देश भरिको सिमा अतिक्रमणको बिषयमा संघर्षमा छौं । यसका लागी हामीले जनतालाई सुसंगठित र एकताबद्ध परिचालन गर्दै कुटनैतिक, राजनैतिक, जनदबाबको एकीकृत योजना बनाउनु पर्छ । मुख्य कुरा वार्ता बाटै समस्याको समाधान खोज्ने हो । सिमा रक्षाका लागी मुलत सिमानाका जनता नै हाम्रा मुल आधार (पिलर) हुन । ती जनताको दैनिक जीवन संचालनको सुबिधा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने गरि सरकारले नीति तथा योजना बनाउनु पर्छ । बिओपीले मात्र सिमा रक्षा हुँदैन जनतालाई पनि जोडनु पर्छ । अहिले अरु पर्खाल भन्दा डिजिटल पर्खाल बनाउन जरुरी छ । जसले दुबै देशको सुरक्षा संबेदनशीलतालाई समेत सम्बोधन गर्छ । दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध, आवश्यकता र व्यवहारलाई पनि विश्लेषण गर्नु पर्छ । जनता बिचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै सरकारको गलत रबैया र हर्कतको बिरोध गर्नु पर्छ ।
२. आर्थिक आत्मनिर्भरता,समृद्धिको बाटो यसका लागी उदार अर्थतन्त्रको बाटो नभै समाजवादी सिद्धान्तका आधारमा योजनाबद्ध ढंगले उत्पादक शक्तिको बिकास गर्दै उत्पादनका साधन माथि सामुदायिक र सामाजिक स्वामित्व स्थापना गर्ने बाटो अपनाउनु पर्छ । हाम्रा श्रोत साधनहरु नेपाली जनताले स्वतन्त्रता पुर्वक त्यसको उपयोग, र समृद्धिका लागी प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्नु पर्छ । नकि कुनै शक्ति केन्द्रको योजनामा निजीकरण गर्ने, जनताले उपयोग गर्न नपाउने ।
यी दुई पाइलाहरु योजनाबद्ध चालेर मात्र हामी आत्मनिर्भर र स्वाधीन राष्ट्र निर्माणको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छौं ।?
कालापानी क्षेत्रमा हाम्रो पुर्ण स्वामित्व कायम गर्न राजनैतिक र कुटनैतिक संवाद मुख्य कुरा हो । तर यसको एउटै सर्त छ हामीले हासिल गरेको राष्ट्रिय एकता जनतामा आएको उत्साहलाई कायम राख्न केही सर्तहरू छन त्यो भनेको हाम्रो पार्टीको आन्तरिक एकता हो । त्यो एकताका लागी हामी आआफ्नो अहम छाडेर रुपान्तरित हुन जरुरी छ । आपना कमिकम्जोरी स्वीकार्न, आफैलाई सच्चाउने, छलफल बहस गर्दै नयाँ निष्कर्षमा पुग्ने कुरामा रुचि पूर्वक लाग्नु पर्छ । राष्ट्रको भबिस्य रुपान्तरणका साथ एकताबद्ध हुनुमा छ । रुपान्तरणका लागी पार्टी भित्र बहस, छलफल,आत्म आलोचना र संघर्ष आवश्यक छ । कुर्सी फेरेर समस्या समाधान हुँदैन चिन्तन बदल्नु पर्दछ । आजको बस्तुगत परिस्थिति अनुरुप जनता र देशको आवाज अनुसार आफैलाइ फेर्नु पर्छ । मुख्य गरि नेतृत्व टिमले त्यसमा पनि प्रमुख नेतृत्वले सहि ढङ्गले सोच्नु पर्छ र व्यवहार गर्नु पर्छ । राष्ट्र र जनता नै मुख्य कुरा हो ।
Previous post: प्रधानमन्त्री ओलीले भने- ‘नयाँ नक्सा छाप्यो भनेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछु भन्ने नसोचे हुन्छ’
Next post: आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने सपना कसैले नदेखे ठिक :प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली